FIKAROHANA : Natolotra ny oniversiten’Antananarivo ny boky « Ny fiandohan’ny Malagasy »
Taorian’ny fizarana sy fanolorana ny boky « Ny Fiandohan’ny Malagasy » tamin’ireo mpikaroka isan-tokony nanampy tamin’ny famoahana ity angom-pikarohana ity, manohy ny dingan’ny fanapariahana izany ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. 20 janvier 2022
Natao laharam-pahamehana ny fanomezana ny boky, izay maimaimpoana ho an’ireo sekoly sy ambaratonga samihafa tokony hisitraka izany, isan’izany ireo ivon-toeram-pamakiam-boky. Notolorana ny angom-pikarohana avokoa ireo sampam-pampianarana rehetra eny amin’ny Oniversiten’ Ankatso, toy ny tao amin’ny Fakiolten’ny teny aman-tsoratra sy ny maha-olona, ireo zana-tsehatra toy ny lalàna, ny anthropolojia, ny COMMO, ny tantara, ny Malagasy. Hisy ihany koa ny boky izay hapetraka ao amin’ny trano famakiam-boky, ka ho azo ampiasain’ny mpianatra hanovozany fahalalana na hanaovana fikarohana.
Tanjona napetraky ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, tamin’ny namokarana ny boky rahateo ny hanehoana ny hambom-po maha-Malagasy, ny fandravonana ireo voka-pikarohana marolafy ary indrindra handravana ireo hevi-diso mikasika ny fiandohan’ny Malagasy. Manamarika ihany koa ny fiizina ity angom-pikarohana navoaka ity. Nambaran-dRamatoa Minisitra Lalatiana Andriatongarivo nandritra ny lahateniny, fa fanamby napetraky ny Fitondram-panjakana ankehitriny ho isan’ny laharam-pahamehana ny fanandratana ny kolontsaina ho fanoitra amin’ny fampandrosoana.
Voarakitra rahateo ao anatin’ny fifanarahana (contrat programme) an’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny manamafy ny maha izy azy ny Firenena sy ny vahoaka ao aminy (identité). Hanampy betsaka ireo mpianatra amin’ny fikarohana ataony ny fahazoana ity boky ity, hoy kosa ny filohan’ny Oniversiten’Antananarivo. Tsara ny mampahatsiahy fa ny boky « Ny Fiandohan’ny Malagasy » dia angom-pikarohana, izany hoe fitambarana fikarohana maromaro fa tsy hoe akory fikarohana vaovao izay mbola tsy nisy nanao na naheno akory. Hitohy hatrany ny dingana fanapariahana izany amin’ity taona vaovao ity.